CNC router atc alwaax alwaax alwaax alwaaxyada alwaaxa alwaaxa alwaaxa alwaaxa - Jinan Apex Makiinado Qalabka Co., Ltd.
Nidaamka guddiga adag, albaabka golaha, albaabka alwaax, albaab alwaax farshaxan ah, albaab aan rinji lahayn, iska ilaali dabaysha, hannaanka daaqadda farshaxanka, mashiinka nadiifinta kabaha, golaha mashiinka ciyaarta iyo guddiga, miiska mahjong, miiska kombiyuutarka, iyo sidoo kale codsiyada kale ee biraha iyo biraha jilicsan.
3 dhidibka 1325 mashiinka xardho alwaaxa CNC samaynta alaabta guriga
Warshadaha alwaaxa: router CNC waxaa loo isticmaali karaa alwaax adag, alaabta mahogany, albaabada rinjiga MDF, albaabada alwaax adag, albaabada isku dhafan, albaabada armaajo iyo daaqadaha, armaajooyinka agteeda, shaashadda isku laaban iwm.
Warshadaha Xayeysiinta: router-ka CNC wuxuu xardhan karaa dhammaan noocyada calaamadaha, alaabada calaamadaha, calaamadaha ganacsiga, summadaha, calaamadaha, hadiyadda qurxinta, ee la xardhay
Biladaha, shahaadooyinka, xusuus-qorrada, looxyada sawirka, qurxinta alaabta guriga, taarikada PVC, looxyada PCB (qodista iyo xardho), looxyada midabka Double ah, akriliyada iwm.
Warshadaha Farshaxanka: Alwaaxda, bambooyinka, looxyada dabiiciga ah, saxanka midabka laba-geesoodka ah, mad-madow iyo waxyaabo kale oo ku saabsan qaabab kala duwan oo qurux badan iyo xardho qoraal.
Qalabaynta Sare 6060 ATC Qaab Mashiinka Aluminium Xardho CNC Router
Waxay ku habboon tahay xardho, xoqidda iyo qodista si isku mid ah dhammaan noocyada qalabka
sida birta, naxaasta, aluminium iyo caagagga.
Si ballaaran u codso baabuurta, caaryada la isku duro, caaryada birta iyo warshadaha caaryada xardho.
Gaar ahaan loogu talagalay xardho iyo xoqidda wasakhahaasi, muraayadaha indhaha, saacadda, guddi, calaamadda, sumadda, naqshadeynta iyo ereyada saddex-cabbirka iyo muuqaalka kore ee baaxadda weyn.
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Loogu Talo Galay Oo Si Toos ah Loox Loox Loogu Sameeyay
Soosaarida alaabada adag ee alwaaxa, jaranjarada alwaaxda adag, tiirarka alwaaxda, sagxadaha sagxadda adag, alwaax qurxin, farshaxan qoryo,
sida wareejinta makiinadaha gogosha shaqeeya. Waxay khuseysaa alaabta guriga, jaranjarooyinka, qurxinta, warshadda wax soo saarka farshaxanka alwaax, iwm.
Waxyaalaha ugu dambeeya waxaa ka mid ah qaybo shaqo oo kala duwan, qaab saxan, qaab tuubo ah iyo farsamooyinka alwaaxda gawaarida, sida tiirarka jaranjarada kala duwan, tiirka Roomaanka, tiirka guud, miisaska ama kuraasta lugaha, goob-joogga, weelka alwaax, miiska alwaaxda, fiidmeerta baseball, alaabta gaariga alwaaxda , tiirarka sariirta carruurta, iwm.
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka CNC
Waxaa si weyn loogu isticmaalay warshadaha sida aerospace, mashiinada beeraha, mashiinada dhismaha, waxsoosaarka tareenka, soo saarida wiishka, gawaarida dhismaha qaaska ah, soo saarida aaladda, soo saarida mashiinada saliida, mashiinada cuntada, xayeysiinta qurxinta, adeega processing shisheeye iyo dhamaan noocyada warshadaha ee laxiriira wax soo saarka farsamada.
Birta, aluminium, xaashida galvanized, go' cad, saxanka titanium iyo taarikada kale ee biraha.
Falanqaynta qolofka mashiinada iyo alaabada elektaroonigga ah, calaamadaha xayeysiinta, farshaxanada, beerta birta, soo saarida gawaarida, dhismaha doonida, qalabka korontada, goynta looxyada.
Mashiinka Goynta Fiber Laser ee Birta / ahama birta / Copper / Aluminium
Qalabka Fiber Laser Going wuxuu ku habboon yahay jarista birta leh xaashida birta leh, saxanka birta ah ee khafiifka ah, Xaashida Kaarboonka Birta ah, Alloy Steel Plate, Xaashida Guga, Xaraashka Birta, Birta Galvanized, Xaashida Gawaarida, Aluminium Aluminium, Xaashida Copper, Xaashida naxaasta ah, Saxanka Maarta ah , Saxanka Dahabka ah, Saxanka Lacagta ah, Saxanka Titanium, Xaashida Birta, Saxanka Birta, Tubooyinka iyo Dhuumaha, iwm
Mashiinnada Goynta Fiber Laser ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa soo saarista boodhka, Xayeysiinta, Calaamadaha, Calaamadaha, Waraaqaha Birta, Waraaqaha LED-ka, Ware-ka jikada, Waraaqaha Xayeysiinta, Xaashida Birta ee Xawaaladda, Qaybaha Birta iyo Qaybaha, Ironware, Chassis, Rack & Processing Processing, Metal Crafts, Qalabka Farshaxanka Birta, Goynta wiishka wiishka, Qalabka kombiyuutarka, Qaybaha Gawaarida, Muraayadaha Muraayadaha, Qaybaha Elektarooniga ah, Qalabka Magaca, iwm.